WinX DVD Author waa ciyaaryahan caan ah DVD kuu ogolaanaya inaad si ay u abuuraan DVDs kuu gaar ah ka videos on your computer, filimada aad duubay aad camera u gaar ah, ama footage webcam. Waxaa shaqayn kartaa noocyo kala duwan oo nooc DVDs, oo ay ku jiraan oo lagu daray DVD oo laga jaray Rs, DVD-RWs, iyo DVD DL daray ama laga jaray Rs iyo RWs. Laakiin mararka qaarkood aad rabto in aad wax kale. Halkan waxaa ku qoran toban ka mid ah ugu wanaagsan ee Author DVD WinX kale oo halkaas.
Barnaamijkan free soo qaadan oo aan qolka badan on your computer iyo ma aha shubeyso ah oo ku saabsan khayraadka your computer ee. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad si ay u abuuraan DVDs, DVD-HD, DVDs dual-lakabka, iyo Blu-Ray cajalladaha. Waxa kale oo ay gubi karaa CD-yada. Waxa kale oo aad u dabacsan ee ah in ay timaado in ka badan 30 luqadood oo ay taageerto files koodh caalamiga. Haddii aad ordaya ah oo gaboobay Windows 95 computer ama sare ah oo khadka Windows 8 computer 64-yara, ImgBurn shaqeyn doonaan. Waxaa sidoo kale hawshooda waddaa on khamri ah Linux. Waxaad awoodaa inaad dhigay kuu gaar ah xawaaraha qortaa u drive kasta on your computer.
2. Nero Gubidda ROM
Nero waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu caansan ee loo isticmaalo abuuro cajalladaha warbaahinta. Waxaa inta badan ku yimaadda buuxiyey oo ku kombiyuutarada oo qayb ka ah xirmada dhigay ilaa bilowga ah, ama sanduuqyada ee drives disc iibiyo aftermarket ah. Waxaad si fudud u abuuri kartaa mahad cajalladaha u gaar ah si ay u isticmaalaan barnaamijka gubashadeeda, waxayna wax ka videos muusikada, si sawirrada iyaga on. Xataa waxaad u isticmaali kartaa xogta dib ilaa abuuridda disc. Waa barnaamij aad u weyn, inkastoo, si filan waa in kor loo qaado qayb ka ah meel drive adag ilaa xad, ilaa 2 GB, iyo in la abuuro doono shubeyso ah oo ku saabsan khayraadka xasuusta.
Barnaamijkan waxa ay awoodaan in ay la rakibay on Windows, Khamri, iyo Linux. Waa il furan, laakiin weli waa barnaamij awood leh. Waxaad u isticmaali kartaa in la abuuro DVDs ka tiro ka mid ah videos ee aad ka qabto wadid aad u adag, ka 45 qaabab kala duwan. DVD Kuwa ka dibna waxaa la ciyaari karaan on your computer ama aad DVD guriga ciyaaryahanka. Ku dar bedeley ama subtitles haddii aad rabto. Way fududahay in la isticmaalo iyo lacag la'aan ah si loo soo dajiyo, iyada oo aan bloatware wax-socodka sida qaar ka mid ah barnaamijyo kale oo lacag la'aan ah Axmaduu.
DVDFab waa barnaamij aad loo jecel yahay shaqeeya labada mashiinada Windows iyo Macs. Waxaa aad u saamaxaaya in ay abuuraan DVD-ka oo idil video ururinta, haddii ay yihiin videos aad soo bixi ama kuwa aad naftiina duubay. Waxaa gubi karaa DVDs for loo maqli karo ku dhawaad ​​ciyaaryahan kasta DVD, ama waxaa iyaga ku badbaadin kartaa in aad gal ah in ay mar dambe ku gubtaan ama sii sida file ah oo gurmad ah. Ma lumin doontid badan ee tayada videos, iyo ma aad waayi doonto waqti badan mahad xawaaraha ee DVDFab ka shaqeeya. Samee bedeley iyo abuurta filimada kuu gaar ah adiga oo isticmaalaya qaar ka mid ah ka dhisay marto.
Barnaamijkan waxa ay awoodaan in ay la isticmaalo tiro ka mid ah kombiyuutarada, oo ay ku jiraan mashiinada Windows, Macs, iyo kombiyuutarada Linux. Waxaa u furan il freeware. Waxaad gubi karaa DVDs si aad ula wadaagto dadka kale iyo ciyaaro makiinadaha guriga. Haddii aad rabto in aad u gaar ah filimada xirfad aad raadineyso, waxaad kartaa, adiga oo isticmaalaya foom oo menu, ama abuuro bedeley kuu gaar ah. Ma leedahay wax badan oo sawiro? Waxaad isticmaali kartaa DVDStyler si ay u soo duubey kuu gaar ah, sidoo kale. Waxaad sidoo kale ay awoodi karaan in ay isku daraan audio iyo video qaabab on disc la mid ah. Interface waa fududahay in la isticmaalo iyo wuxuu kuu ogolaanayaa inaad jiidi oo hoos u faylasha aad galay si aad rabto.
Waxa uu barnaamijkaaga u il furan kuu ogolaanaya in aad si loogu badalo file video kasta oo ay u DVD ah in aad markaas wadaagi karaan asxaabta iyo qoyska. Disc ayaa ku dhameysatay kaalinta waa playable ciyaartoy DVD guriga, ku siinaya xoriyad ka your computer. Waxa kale oo aad samayn kartaa VCDs iyo CVDs. Waxayna u shaqaysaa iyadoo mashiinada Linux iyo Windows. Waxa aanu soo qaadan oo aan qolka badan on your computer, laakiin waxa aanu u baahan tahay barnaamijka kale oo loo maqli on your computer.
7. Windows DVD Kan sameeyey,
Sida magaca muujinaysaa, tan waxaa loogu talagalay mishiinada Windows. Waxaa yimaado pre-raran ah oo ku saabsan mashiinada badan, laakiin haddii aad computer ma yimaada leh, waxaad kala soo bixi kartaa barnaamijka oo qayb ka ah Essentials Live on Vista ama Windows 7 kombiyuutarada. Waxaad isticmaali kartaa Windows DVD Kan sameeyey, si ay u abuuraan gaar ah DVD-gobolka-free aad oo macmal ah ka videos iyo sawiro. Waxaad badbaadin karo mashruuc ay ku gubi ka dib, ama aad ka hor tegi karin iyo abuuro DVD aad isla markiiba. Haddii aad doorato in aad badbaadin mashruuca, waxaad ku dari kartaa files dheeraad ah oo mashruuca ka hor inta wax soo saarka ugu danbeeya.
8. Video Free in DVD Converter
Sida magacaba ka muuqata, tani waa barnaamij lacag la'aan ah oo kuu ogolaanayaa inaad la abuuro DVDs kuu gaar ah oo aad ka dibna ciyaari kartaa DVD guriga ciyaaryahanka. Waxaa loogu talagalay in ay ka shaqeeyaan mashiinada Windows. Waxaad samayn kartaa oo keliya ma aha DVDs kuu gaar ah, laakiin waxa kale oo aad u isticmaali kartaa si loogu badalo video files. Dhowr videos lagu dari karaa si mashruuca isku hor eee disc ololaya. Free Video dhigi doonaa menu ah inuu kaa caawiyo inaad maraan oo dhan ee files si fudud. Barnaamijka Tani waxay leeyihiin barnaamijyo kale guraa la, sidaas darteed haddii aadan rabin in kasta oo iyaga ka mid ah, waxaad u baahan tihiin si ay u tagaan si taxadar leh iyada oo loo marayo hanaanka la rakibo.
Barnaamijkan waa barnaamij u furan il kuu ogolaanaya in aad si loogu badalo dhawr nooc oo ah video files si DVD fayl ka dibna aad gubi karaa files kuwa gal DVD. Waxaad samayn kartaa qaar ka mid ah tafatirka aasaasiga ah iyo ku daro bedeley. AHV xitaa kuu ogolaanaya in aad ku darto subtitles iyadoo la isticmaalayo wax abuura subtitles ah oo uu soo dhisay. Waxaad ku dari kartaa dhowr ah kuwan raadkaygay Cinwaan, sidoo kale.
Tani software DVD abuurka karaa inuu caawiyo DVDs farsamada aad kombiyuuterada Windows ama Mac, ay ka mid yihiin Windows 8. ay fududahay in la isticmaalo interface ka dhigi doonaa cinch si aad u abuuraan duubey ama DVDs kuu gaar ah si sahlan. Waxaa jira tiro ka mid ah arrimo menu oo lacag la'aan ah oo aad u isticmaali kartaa in aad ku darto xiriiri xirfadle. Ku dar music ee asalka ah, sidoo kale, haddii aad rabto. Ka hor inta aadan iyaga gubi in DVD, waxaad samayn kartaa tafatirka qaar ka mid ah videos ama nadiifinta ee sawirada, oo ay ku jiraan ay ka saareen guutooyinkii madow on videos. Markaas kaliya jiidi faylka galay DVD Creator oo guji gubi. Taasi waa!
Sidaas daraaddeed waxaa aad u tagto - toban barnaamij weyn in ay yihiin xal kale WinX DVD Author. No arrinta nooca nidaamka qalliinka aad leedahay, waxaad yeelan doontaa in ay hesho barnaamij kaliya kugu habboon.
> Resource > bedelan karo > Top Toban WinX DVD Author Player lagu bedelan karo